Home » အသားပေး » ကွမ်တမ် SureStaQ်4K သိုလှောင်
ကွမ်တမ် SureStaQ်4K သိုလှောင်
ကမ္ဘာတစ်လွှားကဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုအိမ်များ 4K ဝယ်ယူသို့ရေငုပ်ဖြစ်ကြသည်။ 4K ရိုက်ကူးရန်အတွက်အဆိုပါကင်မရာကိုထုတ်ကုန်ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုပေါများဖြစ်ကြပြီးအများဆုံးဖွယ်ရှိသငျသညျ (မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာဒါမှမဟုတ်အလွန်အနည်းဆုံး,) ကို 4K အတွက်အဓိကအားဖြင့်ပစ်သတ်ရန်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူဝယ်ယူခဲ့ကြသည်။ သင့်ရဲ့ post ကိုသိုလှောင်မှုခြွင်းချက်သိုလှောင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်တစ်ဦးမဖြစ်မနေဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူကြီးမားတဲ့ဖိုင်တွေနဲ့ Multi-စီးဖြစ်စဉ်များကိုကိုင်တွယ်နိုင်ပါလိမ့်ရန်လိုအပ်သည်ဟုသိမှတ်လျက်, ရှိသမျှထုတ်လုပ်မှုအိမ်ခြေ 4K သိုလှောင်မှုလိုအပ်ချက် addressing ကိုကြည့်နေကြသည်။ သေချာတာပေါ့, စက်မှုလုပ်ငန်း 4K ၎င်းတို့၏အကူးအပြောင်းကိုစတင်ထုအတွက်အုတ်မြစ်ချခဲ့ပြီးအများအပြားသည်ယခုအခါခြင်းဖြင့်ပြု, ဒါမှမဟုတ်နောက်နှစ်သို့မဟုတ်ဒါအတွင်းကအနည်းဆုံးစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းပါပြီ။ (သင့်ရွေးချယ်မှု၏) ကင်မရာ၏ရွေးချယ်ရေးအတွက်လွယ်ကူသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, ကသင့်ရဲ့ပုခက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရဲ့အကြောင်းကိုသင်၏လက်ရှိသိုလှောင်မှုအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်အတူလုပ်ဖို့မယ့်အဘယ်အရာကိုပါပဲ။
သင့်ရဲ့လက်ရှိအခြေခံအဆောက်အဦများချင့်တွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းဦးစားပေးနံပါတ်တစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒီမတိုင်မီတစ်ဦးကို client တစ်ခု 4K ထုတ်ကုန်ကတိပေးနှင့်အဆုံးရလဒ် (သည်းခံပါ ... ပျားရည်ပေးနိုင်စွမ်းသိုလှောင်ရှိခြင်းမပြုသောအမှုများဆက်ဆက်ငါဖိုင်များဆက်ဆက်ပျားရည်များအတွက်မှားနိုင်ပါတယ် Compressed, ငါ၏ကလေးများ (1989) -IMDb rating ကျုံ့ 6.3 / 10)3ကြယ်ထွက်5-received ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် 4K post ကိုထုတ်လုပ်မှု၏အံ့သြဖွယ်ကမ္ဘာကြီးရန်သင့်ခရီးပေါ်တွင်သင်ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုအများအပြားသိုလှောင်မှုလိုအပ်ချက်သော့ချက်အချက်များရှိပါသည်။ ဒီမှာအချို့အလွန်အရေးကြီးသောသူမြားကိုရှေးခယျြပါကြပါစို့။ performance: Capture အစဉ်းစားပါ Edit နှင့်ထဲက Play ။ သင့် system ကို "ကြီးမားသောသုံး" အတွက်ပေးနိုင်သလား? ဒါဟာကြီးမားတဲ့နှင့် compressed လုပ်မထားတဲ့ 4K သို့မဟုတ်ချုံ့ဖိုင်တွေကိုပင်မျိုးစုံစီးဘို့အလွန်မြင့်မားတဲ့ frame ကိုနှုန်းထားများကိုင်တွယ်နိုင်ပါလိမ့်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း: အဆိုပါ shared files တွေကိုမျိုးစုံဒေသများထံမှရယူရနိုင်သလား? သင့်ရဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များကနေ client ကိုယျသလော အပေါ်တွင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှု: သင့်ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်အဘို့, ဒါပေမယ့်လည်းစီမံကိန်းကိုချက်ချင်း access ကိုအဘို့သင့် Archive စာကြည့်တိုက်ဘို့မသာ, 4K ရိုက်ကူး၏ကြီးမားသော volumes ကိုလိုက်လျောညီထွေရန်လိုအပ်ကြောင်း။
ကွမ်တမ် 4k ပြည်သူတို့၏ခရီးအတွက်အားလုံးအကျိုးရှိမည်သည့်အံ့သြစရာကုန်ပစ္စည်းနှင့်ရည်ညွှန်းဗိသုကာရှိပါတယ်။ အဆိုပါ SureStaQ ™ 4K ရည်ညွှန်းဗိသုကာ နှင့်အစွမ်းထက် ကွမ်တမ် StorNext6သောမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အသုံးပြုမှုအတွက်လက်ရှိတွင်မည်သည့် 4K ကဗီဒီယိုလုပ်ငန်းအသွားအလာကိုထောကျပံ့ဖို့အဆင့်မြင့်ဒေတာစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူတင်ဆောင်နှင့်သင့်ထိန်သိမ်းအတွက်လျော့နည်းဟာ့ဒ်ဝဲလိုအပ်တစ်ဦးအာကာသချွေတာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ SureStaQ နှစ်သက်တဲ့မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မီဒီယာလုပ်ငန်းအသွားအလာများအတွက်မျှော်လင့်လိုအပ်ချက်များကိုကူညီဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။ ရည်ညွှန်းဗိသုကာများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအားဖြင့်ကောက်ယူလက်ရှိအစစ်အမှန်ကမ္ဘာ 4K Workflows ၏စဉ်ဆက်မပြတ်သုတေသနခဲ့သည် ကွမ်တမ်'' s ကိုအင်ဂျင်နီယာများ။ တစ်ခုချင်းစီကိုဗိသုကာလက်ရှိဝယ်လိုအားတွေ့ဆုံရန်စိတ်ကြိုက်ရှိပါတယ်, နှင့်လိုအပ်သည့်အခါသင်တန်း၏, ထစကေး။ အဆိုပါ StorNext ထုတ်ကုန်လိုင်းအနည်းငယ်မျှသာမြို့တော်ကုန်ကျစရိတ်များအတွက်အောင်နှင့်သင့်သိုလှောင်မှုလိုအပ်ချက်များကိုများအတွက် key ကိုမှတ်တွေ့ဆုံ 4K မှ High Definition ကနေချောချောမွေ့မွေ့မှုအဆင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
ဘယ်လိုသို့ပိုမိုသိရှိလိုပါက ကွမ်တမ် SureStaQ 4K ရည်ညွှန်းဗိသုကာ, သင့် 4K သိုလှောင်မှုလိုအပ်ချက်များကိုပံ့ပိုးကူညီသည့် eBook ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်: "သင်၏ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးအဖွဲ့ 4K အတှကျအဆငျသငျ့ပါပဲ။ သို့သော်အဘယ်အရာကိုသင့်ရဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံအကြောင်း? "
ကွမ်တမ် တစ်ဦးဦးဆောင်စကေးထွက် tier သိုလှောင်မှုအတွက်ကျွမ်းကျင်သူ, archive ကိုများနှင့်ဒေတာများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, ခွဲဝေမှုဖမ်းယူခြင်းနှင့်တစ်ခုလုံးကိုဒေတာဘဝမှတ်တိုင်သံသရာစက်ဝိုင်းကျော်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဘို့အသိဉာဏ်ဖြေရှင်းချက်ပေးဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့သုတေသီများသိပ္ပံနည်းကျရှာဖွေတွေ့ရှိ, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့စစ်ဆင်ရေးချောမွေ့ဖို့ကြိုးစားနေသေးငယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအရှိန်အဟုန်မြှင့်လုပ်ဆောင်နေပါကထိပ်တန်းရုပ်ရှင်စတူဒီယိုလာမည့် Blockbuster ကိုဖန်တီးရန်ရှာနေမယ့်ဖြစ်စေ, ဖောက်သည်များကသူတို့ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရေးအတွက်ဤပိုင်ဆိုင်မှု၏တန်ဖိုးအမြင့်ဆုံးကိုကူညီပေးပါတယ်။ , ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို virtual နဲ့ cloud ပတ်ဝန်းကျင်မှာများအတွက်အကောင်းဆုံး-In-class ကို disk ကို, တိပ်ခွေနှင့် software ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုပြည့်စုံအစုစုနှင့်အတူကျနော်တို့ကိုသူတို့အများဆုံးတောင်းဆိုမှုများလုပ်ငန်းအသွားအလာစိန်ခေါ်မှုများနှင့်အခွင့်အလမ်းများကိုဖြေရှင်းရန်ဖောက်သည်ကို enable ။
CES2017 MStar အသံလွှင့်ကုန်တင်ကားအပြင်ဘက်တွင် post ကိုထုတ်လုပ်မှု SoftAtHome SoftAtHome, MStar, CES2017	2017-08-11
ယခင်: ENCO IBC2017 မှ MOM နဲ့အဖေတို့အတွက်နယူးတီထွင်ဆောင်ကြဉ်း
နောက်တစ်ခု: Waze ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းမှတဆင့်ဝယ်ယူခြင်းအဘို့အ Now ကိုရရှိနိုင်ယူအက်စ်အေရေကူးအကြောင်းအရာ
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "Quantum SureStaQ်4K သိုလှောင်" ။ http://www.broadcastbeat.com/quantum-surestaq-streamlines-4k-storage/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။